တာချီလိတ်ရှိ ဟိုတယ်တစ်ခု၌ တရုတ်နိုင်ငံသား တစ်ဦး သေဆုံး | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
တာချီလိတ်ရှိ ဟိုတယ်တစ်ခု၌ တရုတ်နိုင်ငံသား တစ်ဦး သေဆုံး
တာချီလိတ်မြို့၊ ၀မ်ကောင်းရပ်ကွက်ရှိ ဖီးနစ်(phoenix)ဟိုတယ်တွင် တည်းခိုနေစဉ် ပြင်ပဒဏ်ရာ တစ်စုံတစ်ရာ ရရှိခြင်းမရှိဘဲ တရုတ်နိုင်ငံသား အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံးသွားကြောင်း သိရသည်။
တာချီလိတ်မြို့တွင်ရှိသော မြန်မာဧရာမွန်ကုမ္ပဏီ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ တရုတ်နိုင်ငံသား လျှပ်စစ်ပညာရှင် အသက်(၅၁)နှစ်ရှိ Mr. He Xiaowan မှာ တာချီလိတ်မြို့သို့ မေလ(၁၁)ရက်နေ့က လာရောက်ပြီး အဆိုပါဟိုတယ်၌ တည်းခိုရင်း မေလ(၁၂)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက သေဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သေဆုံးသွားသူ၏ ရုပ်အလောင်းအား တာချီလိတ်ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ထားပြီး သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ်(၇/၂၀၁၆)ဖြင့် အမှုဖွင့်လှစ်၍ စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း တာချီလိတ်မြို့မရဲစခန်းမှ သိရသည်။
တာခြီလိတျမွို့၊ ဝမျကောငျးရပျကှကျရှိ ဖီးနဈ(phoenix)ဟိုတယျတှငျ တညျးခိုနစေဉျ ပွငျပဒဏျရာ တဈစုံတဈရာ ရရှိခွငျးမရှိဘဲ တရုတျနိုငျငံသား အမြိုးသားတဈဦး သဆေုံးသှားကွောငျး သိရသညျ။
တာခြီလိတျမွို့တှငျရှိသော မွနျမာဧရာမှနျကုမ်ပဏီ၏ ဖိတျကွားခကျြအရ တရုတျနိုငျငံသား လြှပျစဈပညာရှငျ အသကျ(၅၁)နှဈရှိ Mr. He Xiaowan မှာ တာခြီလိတျမွို့သို့ မလေ(၁၁)ရကျနကေ့ လာရောကျပွီး အဆိုပါဟိုတယျ၌ တညျးခိုရငျး မလေ(၁၂)ရကျနေ့ နံနကျပိုငျးက သဆေုံးသှားခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
သဆေုံးမှုနှငျ့ပတျသကျ၍ သဆေုံးသှားသူ၏ ရုပျအလောငျးအား တာခြီလိတျပွညျသူ့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောငျထားပွီး သမှေုသခေငျးအမှတျစဉျ(၇/၂၀၁၆)ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့လှဈ၍ စဈဆေး ဆောငျရှကျလြှကျရှိကွောငျး တာခြီလိတျမွို့မရဲစခနျးမှ သိရသညျ။